Tany aminny taona 1910 hatraminny 1928 no nanombohanny fitoriana ny Vaovao Mahafaly tany Morondava. Pretra spiritanina avy any Mahajanga no nitsidika sy namangy ny faritri Maintirano, Morafenobe, Ambatomainty, Antsalova ary Ankavandra. ry zareo m ...
Ny Papa Clément XIII no nanorina ny fetin’ny Fo Masin’i Jesoa, tamin’ny 6 febroary 1765. Rehefa nanao fanavaozana ny litorjia sy ny tetiandro ny Kônsily Vatikana Faharoa dia nadraikitra ny fetin’ny Fo Masin’i Jesoa ho fankalazana manetriketrika. ...
Ny Distrikani Manarana-Avaratra dia distrika ao aminny Faritra Analanjirofo, ao aminny Faritanini Toamasina, ao aminny tapany avaratra atsinanani Madagasikara.
Ny Distrikani Maroantsetra dia distrika ao aminny Faritra Analanjirofo, ao aminny Faritanini Toamasina, ao aminny tapany avaratra atsinanani Madagasikara.
Ny Distrikani Fenoarivo-Atsinanana dia distrika ao aminny Faritra Analanjirofo, ao aminny Faritanini Toamasina, ao aminny tapany avaratra atsinanani Madagasikara.
Ny Distrikani Vavatenina dia distrika ao aminny Faritra Analanjirofo, ao aminny Faritanini Toamasina, ao aminny tapany avaratra atsinanani Madagasikara.
Ny Distrikani Soanierana Ivongo dia distrika ao aminny Faritra Analanjirofo, ao aminny Faritanini Toamasina, ao aminny tapany avaratra atsinanani Madagasikara.
Ny zotra Antananarivo-Côte Est dia zotran-dalamby mampitohy anAntananarivo sy Toamasina, mandalo ani Moramanga sy Brickaville. Ny orinasa Madarail no miandraikitra anio zotra io ankehitriny.
I Sisaony dia reniranon i Madagasikara ao afovoan-tany izay mivarina any amin ony Ikopa ao akaikin Antananarivo ka mivarina any amin ny Lakandrano Mozambika miaraka amin ony Betsiboka.
Môpera Pedro Pablo Opeka na i Père Pedro dia pretra katôlika teraka taminny 29 Jiona 1948 tany Arjentina. Izy no namorona ny Akamasoa izay toerana fanampiana ny olona mahantra ao Antananarivo, Madagasikara.
Ny DistrikanAntananarivo-Atsimondrano dia distrika eto Madagasikara, ao aminny tapany avaratra adrefanny FaritaninAntananarivo, ao aminny Faritra Analamanga.
Ny Distrikani Fianarantsoa dia distrika eto Madagasikara ao aminy tapanay afovoanny Faritra Matsiatra Ambony ao aminny Faritanini Fianarantsoa. Vokatry ny fizaràna ny Distrikani Fianarantsoa I taloha taminny taona 2007 izy. Mamakivaky azy ny lala ...
I Charles Ravoajanahary dia olo-manga sy mpanao politika Malagasy teraka taminny 2 May 1917 tao Antananarivo ary maty tao Antsirabe taminny taona 1996. Izy dia anisany nanorina ny antoko ny kongresy ny fahaleovantena Malagasy AKFM taminy taona 19 ...
Andriantsimitoviaminandriandehibe dia mpanjaka no rain Andriamasinavalona izay nodimbiadiny teo amin ny fanapahana an Imerina. Rahefa niamboho Andriantsimitoviaminandriandehibe dia ny zanany lahimatoa Andrianjakatsitakatrandriana aloha no nanjaka ...
Andriantomponimerina dia zanak Andriamasinavalona tamin-dRamananandrianjaka, izay notendren ity mpanjaka ity hifehy ny ampahany amin Imerina, tao Ambohidratrimo. Naditra Andriantomponimerina ka nisy fotoana nitanany ho babo an-drainy hanereny azy ...
Ny DistrikanAnkazobe dia distrika eto Madagasikara, ao aminny Faritra Analamanga, ao aminny FaritaninAntananarivo. Ahitana kaominina 12 izy sady manana velarana 7 458 km 2.
Ny DistrikanAntananarivo-Avaradrano dia distrika eto Madagasikara, ao aminny tapany avaratra adrefanny FaritaninAntananarivo, ao aminny Faritra Analamanga.